र्‍यापिड टेस्टबाट २५ हजार १ सय ४८ नमुना परीक्षण, कुन प्रदेशमा कति? – Health Post Nepal
र्‍यापिड टेस्टबाट २५ हजार १ सय ४८ नमुना परीक्षण, कुन प्रदेशमा कति?
२०७७ वैशाख ८ गते १६:५२
कोरोना भाइसरसको आशंकामा ३३ हजार ५ सय ६२ नमुना परीक्षण भएको छ । पीसीआरबाट ८ हजार ४ सय १४ र र्‍यापिड टेस्टबाट २५ हजार १ सय ४८ नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
र्‍यापिड टेस्टबाट गत २४ घन्टामा ३ हजार १९ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लामा र्‍यापिड टेस्टबाट परीक्षण सुरु भएको छ । हालसम्म प्रदेश १ मा २ हजार ३ सय ४९, प्रदेश २ मा ३ हजार २ सय ३८, बागमती प्रदेशमा ४ हजार ६ सय ७६ नमुना परीक्षण भएको छ ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ७ सय ५१, प्रदेश ५ मा २ हजार ३ सय २४, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार २ सय ३२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ५ सय ७८ नुमना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोमबार देशभर क्वारेन्टाइनमा ५ हजार ९ सय ३६ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने १ सय ११ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
२ सय ६३ जना रेड जोनमा रहेको र नमुना परीक्षण कार्य सुरु भइसकेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए ।
कोरोना संक्रमण हालससम्म ३१ पुगेको छ । ४ जना निको भई घर फर्किएका छन् । २७ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भएको छ । टेकु अस्पतालमा १, पाटन अस्पतालमा २, बालगुङमा १, धनगडीमा ४, विरगञ्जमा ४, भरतपुरमा २, विराटनगरमा १३ जना रहेका छन् ।